Avereno indray ny fisie rakitra 2GB PST.
Home Products DataNumen Outlook Repair Avereno indray ny fisie rakitra 2GB PST
DataNumen Outlook Repair - Avereno ny fisie rakitra PSD 2GB PST
mampiasa DataNumen Outlook Repair hamerina ilay rakitra 2GB PST be loatra anao, amin'ny:
Avadiho ho lasa endrika vaovao Outlook 2003.
Hizara azy ho rakitra kely kokoa
Ny Microsoft Outlook 2002 sy ny kinova ambany dia mametra ny haben'ny PST hatramin'ny 2GB. Isaky ny mahatratra na mihoatra an'io fetra io ny haben'ny rakitra PST dia tsy ho afaka hiditra ao ianao, na tsy afaka manampy data vaovao ao aminy. Io no antsoina olan'ny fisie PST be loatra.
Tsy manana fomba mahafa-po hamahana ny olana i Microsoft. Ny vahaolana tsara indrindra dia ny vokatray DataNumen Outlook Repair, izay afaka mamerina ilay rakitra PST be loatra mora foana sy mahomby. Mba hanaovana izany dia misy fomba roa hafa:
Raha manana Outlook 2003 na kinova avo kokoa napetraka ianao dia azonao atao izany avadiho ilay rakitra PST be loatra ho lasa endrika Outlook 2003 vaovao, izay tsy manana fetra 2GB habe. Ity no fomba tiany.
Raha tsy manana Outlook 2003 na kinova ambonimbony kokoa ianao dia afaka zarao amin'ny fisie maromaro kokoa ilay rakitra PST be loatra. Ny rakitra tsirairay dia misy ampahany amin'ny angon-drakitra ao amin'ny fisie PST tany am-boalohany, saingy latsaky ny 2GB izany hahafahanao miditra ao aminy miaraka amin'ny Outlook 2002 na kinova ambany kokoa nefa tsy misy olana. Ity fomba ity dia somary manelingelina ihany satria mila mitantana rakitra PST marobe aorian'ny fizotry ny fizarazarana.
Fampahalalana amin'ny antsipiriany momba ny olan'ny fisie PST be loatra.
Avereno indray ny fisie rakitra 2GB PST